लाइसेन्सका लागि १ सय ९२ पटक ट्रायल दिँदा पनि ‘फेल’, बन्यो विश्व कीर्तिमान - टि. एल. एन पोस्ट
Home अनौठो कुरा लाइसेन्सका लागि १ सय ९२ पटक ट्रायल दिँदा पनि ‘फेल’, बन्यो विश्व...
सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि सबै देशमा आ–आफ्नो नियम छ। तर सबै देशमा सवारी चलाउने प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण हुनु अनिवार्य छ।
Previous articleतेह्रथुम पावरको आइपीओमा कति पर्यो आवेदन, कतिको हात रित्तो?
Next articleधादिङमा ब्रेक फेल भएर मिनि ट्रक दुर्घटना, ३५ घाइते मध्य गम्भिरलाई हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौ